Rose of Sharon: ချစ်သူ့မွေးနေ့
Posted by rose of sharon at 11:31 AM
ဏီလင်းညို April 8, 2014 at 11:44 AM
ခင်ပွန်းသည်ကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ မရို့စ်ရဲ့စိတ်ထားလေးတွေက စာထဲမှာ သိပ်သိပ်သည်းသည်းပါပဲ။
မရို့စ်ရဲ့ ခင်ပွန်းအတွက် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သော မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ....
rose of sharon April 8, 2014 at 5:47 PM
Thanksalot Nini....
မမ နော် ချစ်သောသူ ကျန်းမာသည့်ပြင် ချစ်သောမိသားစုနှင့် အမြဲပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ့့
Thanksalot Moe...
ချစ်သော မမနော်ရဲ့ချစ်သူ ကျန်းမာပျော်ရွှင်လို့မမနော်တို့ မိသားစုအားလုံး အခုလို ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ မှုတွေ ထာဝရပိုင်ဆိုင်ပါစေ ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ
rose of sharon April 8, 2014 at 5:48 PM
Thanksalot Poe Lay...
မြသွေးနီ April 8, 2014 at 12:19 PM
မနော်ရဲ့ချစ်ချစ်အတွက် Happy Birthdayပါလို့...
ချစ်ခင်တွယ်တာဖွယ်ရာ မိသားစုဝင်တွေရဲ့ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် တန်ဘိုးထားတဲ့ မေတ္တာဖြူဖြူလေးတွေက အင်မတန်မှချစ်စရာပါ မနော်ရေ..
Thanksalot Mya Thwe...
happy birthday to yr dear husband
rose of sharon April 8, 2014 at 5:49 PM
Kai April 8, 2014 at 7:48 PM
အာဘွားကြီးကြီးရောပေးလိုက်ရဲ့လား ကိုကိုအန်ထော်နီလေးကို :D စတာနော်.... Happy Birthday Antony
rose of sharon April 8, 2014 at 8:44 PM
Ma Tint April 8, 2014 at 8:24 PM
Many happy returns of the day & may God Bless Ma Naw's beloved !
rose of sharon April 8, 2014 at 8:45 PM
Thanks T Tint!
စံပယ်ချို April 9, 2014 at 3:35 AM
ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကျေးဇူးတော်ပါပဲ
blackroze April 9, 2014 at 11:47 AM
Happy Birthday ပါ လို့
ပြောပေးနော် မကြီးရိုစ့် 
မြတ်ကြည် April 13, 2014 at 12:35 AM
အစ်မလို ကံကောင်းချင်တယ်။း) တောင်းတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ဝပါစေနော်။